नेपालकै यो अचम्मको मन्दिर जहाँ दर्शन गरे सन्तान नहुने दम्पतिहरुको सन्तान प्राप्त हुन्छ भने लामो समयसम्म नबोल्ने बालबच्चा बोल्न सुरु गर्छन् ! – Khabar Silo
आज दशैँको पाँचौ दिन, कस्तो छ तपाईको भाग्य ? हेर्नुहोस् दिनको सुरुवात गर्नुहोस
आज दशैँको पाँचौ दिन, कस्तो छ तपामेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ अध्ययनमा सफलता मिल्नेछ । व्यावसायिक सफलता । आफन्तबाट जोगिनुहोला । धार्मिक कार्यमा मन लाग्नेछ । लामो दूरीको यात्रा नगर्नुहोला । बृष – इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो जागिरमा पदोन्नतति होला । व्यापारमा फाइदा हुने […]
Posted on June 12, 2021 June 12, 2021 Author khabar silo
काठमाडौँ । आजभोली साँचो माया र भरपक्का मानिस पाउन धेरै नै मुश्किल छ। तर आज पनि दुनियामा यस्ता मानिसहरु पनि अझै छन्। जो कसैलाई साँचो माया गर्न चाहन्छ र जीवनभर साथ दिन पनि। एक अनुसन्धानका अनुसार १०० मा करिब ७० प्रतिशत महिलाहरुले मायामा धोका दिने गरेको खुलेको छ। तिनैमध्येका केहि महिलाहरु यस्ता पनि जो मायामा […]
भाग्यमानी मान्छेले मात्रै देख्ने जिउँदो दाहिने शंखफोटोमा छोएर ॐ लेखी दर्शन गर्नुहोस।
Posted on October 2, 2020 Author khabar silo
शङ्ख शंखेकिराको खबटाबाट बनाइने एक प्रकारको वाद्ययन्त्र हो। यो विशेषगरी धार्मिक कार्यमा प्रयो गमा ल्याइन्छ। शङ्ख शंखेकिराको खबटाबाट बनाइने एक प्रकारको वाद्ययन्त्र हो। यो विशेषगरी धार्मिक कार्यमा प्रयो गमा ल्याइन्छ।जीउँदो शङ्ख समुद्रमा पाइने जलचरले बना एको खबटा हो, यो धेरै जसो वामावर्त अथवा दक्षिणावर्तमा बनेको हुन्छ। प्राचीनकालदेखि नै विभिन्न प्रयोजनमा ल्याइ ने शंख एक प्रकारको […]
चलचित्र प्रेमगीत ३ को पहिलो गित हात्ती ढुंगामा सार्बजनिक